Paikady azo tanterahina amin'ny fifandraisana Omni-Channel | Martech Zone
Paikady azo tanterahina amin'ny fifandraisana Omni-Channel
Talata, Jona 18, 2019 Alatsinainy, 17 Jona, 2019 Samuel Kellett
Ahoana ny fahaverezanao mpanjifa? Omeo traikefa tsy mifanaraka, tsy miraharaha azy ireo, mandefasa tolotra tsy misy ifandraisany? Hevitra tsara rehetra. Ny mpanjifanao dia hifindra any amin'ny orinasa hafa hahitana serivisy ho an'ny mpanjifa tsara kokoa, ary ankehitriny dia miankina amin'ny olona ny olona hevitra an-tserasera ho toy ny vaovaon'ny teny.
Ahoana no foana mpanjifa ve? Ary tsy mitazona azy ireo fotsiny, fa manohana ny tsy fivadihan'izy ireo amin'ny marikao? Rehefa mahatsapa fa karakarain'ny orinasanao ny mpanjifa, handany bebe kokoa aminao izy ireo. Ny tanjona dia ny hanolorana serivisy ho an'ny mpanjifa tsara sy tsy miovaova, manerana ny sehatra rehetra ao amin'ny orinasanao.
Saingy fantatry ny CEO sy ny manager marketing dia mora kokoa izany noho ny vita. Mila fitaovana ianao hanampiana anao hanome karazana serivisy ho an'ny mpanjifa avo lenta sy maharitra izay hitondra ny orinasanao. Ilainao Fifandraisana amin'ny fantsona Omni; fitaovana maoderina izay miantoka traikefa tsy misy tohika ho an'ny fifandraisan'ny mpanjifa rehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.
Fananganana ny tsy fivadihan'ny mpanjifa amin'ny tontolon'ny e-varotra ankehitriny
Ny mpandraharaha rehetra dia mahatakatra fa sarotra ny fitantanana ny fifandraisana. Ny fifaninanana mahery vaika dia mitazona ny fanerena amin'ny fananganana ny marikao mba hahafantaran'ny mpanjifa azy sy hanintona ny tantaranao. Misy paikady tsara hanampy anao amin'izany.
Ampiasao ny fifandraisana Omni-channel amin'ny ampahany ny mpanjifanao sy manangana fampielezana varotra kendrena ho an'ireo fizarana ireo. Engage ny mpanjifanao amin'ny fotoana mety ka hahatsapa izy ireo fa hitan'ny orinasanao.
1. Ampizaro ny mpanjifanao
Ny fizarana ny mpanjifanao dia manome ny zava-dehibe indrindra traikefa mividy manokana azo atao. Rehefa manao fampielezan-kevitra manokana sy mifandraika amin'ny marketing ianao dia afaka mampitombo ny sandan'ny andavanandron'ny mpanjifa ary manangana tsy fivadihana. Amin'ny ankapobeny, misy fomba efatra hampisarahana ny mpanjifanao:
Geographic (aiza izy ireo?)
Demografika (iza izy ireo? Lahy sy vavy, taona, fidiram-bola)
Psychographic (iza marina izy ireo? Karazan'olona, ​​kilasy sosialy)
Fihetsika (lamina fandaniana, tsy fivadihana marika)
Amin'ny alàlan'ny automatisie mandeha amin'ny herin'ny AI dia afaka mandeha tahaka ny tadiavinao amin'ny fizaranao ianao, ary koa manangona angon-drakitra sarobidy momba ny mpanjifanao sy ireo mpitsidika tranokala.
2. Ataovy manokana ny fifandraisana aminao
Te hahafantatra ny mpanjifa fa manan-danja aminao izy ireo. Tian'izy ireo ny fifandraisana iray, ary ny fikarohana dia mampiseho fa vonona ny hanakalo ny angon-drakitra manokana momba izany izy ireo.
Rehefa mampiasa fitaovana maoderina ianao hanangonana angona momba ny lamina sy ny fividianana ny mpanjifa dia afaka manome karazana traikefa manokana izay hahafaly ny mpanjifanao ianao. Anisan'izany ny paikady:
Manolotra fifanarahana marefo amin'ny fotoana takela rehefa manandrana mandao ilay tranonkala ny mpitsidika
Manamboatra ny tolotra upsell mifototra amin'ny fitondran-tena sy ny fahalianan'ny mpanjifa tsirairay
Manolotra ny saraky ny entana sarety nariana ho fampahatsiahivana ny mpanjifanao ny toerana nialan'izy ireo
Ary mbola misy maro hafa tetikady manokana. Ny fanatsarana hatrany ny fitaovan'ny rindrambaiko marketing dia afaka manampy ny orinasanao manome vahaolana mavitrika indrindra amin'ny filan'ny mpanjifa. Ny teknolojia AI dia afaka manampy anao hahatakatra sy haminavina ny fitondran-tena mividy, hizara angon-drakitra ary hampianatra ny mpanjifa momba ny marikao - mihetsika. Omeo azy ireo izay tadiaviny alohan'ny angatahin'izy ireo izany!
3. Mifampiresaka amin'ny fotoana mety
Ireto misy fomba ahafahanao mampiasa sora-baventy amin'ny fomba mahomby:
Milaza ...! Asongadino ny fampahalalana ilaina (toy ny fandefasana maimaim-poana) amin'ny fotoana manan-danja amin'ny fizotran'ny fividianana.
Fanavahana. Fahafaham-po be indrindra amin'ny mailaka marika na fampandrenesana fanosika anao. Ataovy izay hahatonga ny mpanjifanao ho ao amin'ny 'The List'.
Atsangano ny tsatòka. Ampio ny tsindry mividy amin'ny alàlan'ny fampisehoana hoe iza koa no mahita na mividy entana mitovy amin'izao fotoana izao.
Fanamafisana ny fitomboana amin'ny alàlan'ny Teknolojia
Miaraka amin'ny rindranasan'ny fifandraisana omni-channel omni-Powered ny orinasanao dia afaka mamorona traikefa nahafinaritra an'ny mpanjifa. Ireo fiasa toy ny Jery Mpanjifa Tokana, Scenario amin'ny antsipirihany, ary Layers amin'ny Internet (rakotra eo an-toerana) dia afaka manampy amin'ny fampivoarana ireo paikad-barotrao.
Fijeren'ny mpanjifa tokana
Tsy zaka ny manara-maso ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny sehatra samihafa. Amin'ny alàlan'ny fifandraisana omni-channel, ny fifandraisana amin'ny mpanjifanao rehetra dia voatanisa - amin'ny alàlan'ny mailaka, amin'ny telefaona, amin'ny alàlan'ny media sosialy, ary na dia amin'ireo hetsika eo an-toerana aza - amin'ny toerana iray.
The Fijeren'ny mpanjifa tokana (na SCV) mampiseho ny mombamomba ny angon-drakitra ampiasainao. Ny piraofilina tsirairay dia misy ny hetsiky ny mpanjifa, ny safidin'ny vokatra, ny tantaran'ny fividianana, sns. Ny fananana an'ity data rehetra manankarena ity amin'ny fomba fijery iray dia ahafahana mampiavaka ny fizarana manokana sy ny varotra kendrena.
Hamarino tsara fa ny SCV anao dia manolotra fanitsiana, fanitsiana ary fanavaozana amin'ny fotoana tena izy, mba hahafahanao manome ny traikefa mpanjifa mifandraika sy manampy indrindra.
Scenarios amin'ny antsipiriany
Raha ny amin'ny fitantanana ny paikadim-barotra misy fizarana dia ny mandeha ho azy no zava-dehibe. Amboary ny trangam-pifandraisana mifototra amin'ny fepetra namboarina, ary alao antoka ny firosoana ara-potoana amin'ny mpanjifa tsirairay.
Ireto misy ohatra mandeha ho azy:
Mailaka arahaba ho an'izay misoratra anarana amin'ny lisitry ny mailaka
Webhook izay manaitra anao isaky ny misy mijery ao amin'ny fivarotanao
Paikady mahomby kokoa
Ireo fotokevitra sy hevitra rehetra ireo dia tsara sy tsara, fa andao handinika lalina kokoa sy hikaroka fomba mahomby kokoa hampiasana ny fifandraisana omni-channel. Ireto misy paikady manokana telo hijerena:
1. Email tsara indrindra handefasana fotoana
Raha kivy amin'ny valin'ny marketing amin'ny mailaka ianao dia tsy irery ianao. Saingy misy fomba iray hanatsarana ny ezaka ataonao eto mba hahazoana antoka fa manao izay rehetra vitanao ianao.
Paikady: Manangana mailaka izay mitarika hifanaraka amin'ny hetsika manokana, toy ny fandefasana fampandrenesana fanindriana. Ny algorithm dia handefa ireo mailaka ireo ho azy amin'ny fotoana mety, hamerina ny tahan'ny fisokafan'ny mailaka tsaratsara kokoa ary hampiditra ireo mpanjifa mety.
2. Hatanjaho indray ireo sarety nafoy
Tamin'ny 2016, Business Insider dia nanombana izany 2.75 trillion amin'ny entam-barotra fiantsenana nilaozana azo averina. Mety mahazo tombony amin'ny ampahany amin'izany ve ny orinasanao?
Paikady: Ampahatsiahivo ny mpanjifanao ny zavatra navelany tamin'ny alàlan'ny mailaka, ora tokony ho adiny iray taorian'ny fifampiresahan'izy ireo farany. Ampidiro ao anaty sari-tanany ny lisitry ny entana sy ny hetsika fiantsoana. Tetikasa sarotra kokoa hapetraka io fa mendrika ny valiny mivaingana sy azo refesina.
3. ROPO: Fikarohana an-tserasera, Fividianana ivelan'ny entana
Miaraka amin'ny tsenan'ny e-varotra miroborobo dia mety sarotra ny mino an'izany 90% amin'ny varotra amerikana mbola mitranga amin'ny olona. Ho an'ireo orinasa manana magazay fivarotana dia ilaina ny mampifandray ny tontolon'izy ireo an-tserasera sy ny biriky sy ny rihitra mba hitahirizana sy hanambarana ny mombamomba ny mpanjifa.
Strategy: Manomboha programa Loyalty card izay azon'ny mpanjifa ampiasaina amin'ny fivarotana izay mampifandray ny mombamomba azy ireo sy ny angon-drakitra an-tserasera. Ankehitriny ianao dia afaka manambatra ny fitondran-tenany an-tserasera sy ny tantaran'ny fividianana ivelan'ny Internet. Makà mombamomba ny mpanjifa feno kokoa, ampidiro ao anaty fampielezankevitra kendrenao izy ireo, ampitomboy ny traikefan'izy ireo amin'ny tolotra manokana ary amporisiho ny tsy fivadihan'ny mpanjifa tena ilaina.
Ho amin'ny ho avy
Zava-dehibe ho an'ny orinasa ny mijanona ho manan-danja, ary ny fitaovan'ny rindrambaiko hitazonana ny orinasanao alohan'ny fihodinana dia ampiasain'ny AI. Ny serasera omni-channel dia manome anao hery hampiambina ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny personalization, automation ary marketing marketing kendrena. Avelao hampitombo ny lanjan'izy ireo mandritra ny androm-piainany ary koa ny anao io fomba fiasa io.
Tags: kalesy fiantsenana nilaozanafandaozana saretympanjifa tsy mivadikafotoana fandefasana mailakaExponeajeografiafe-potoanaomnichanneltraikefa mividy manokanascvfahitan'ny mpanjifa tokanatetika
Mitarika ny ekipa atiny ao amin'ny Exponea aho (rindrambaiko marketing iray manontolo, ahafahan'ny olona miaina traikefa amin'ny ambaratonga), izay hitantanako ny famokarana lahatsoratra e-varotra sy fandalinana tranga ary koa ny atiny ho an'ireo webinar sy hetsika. Ny fitiavako ny fitantarana tantara: mitady fomba vaovao sy mamorona foana aho hanazavana lohahevitra sarotra. Rehefa tsy eo amin'ny latabatro aho dia tiako ny manao fampisehoana miaraka amin'ny tarika hatsikana mampihomehy ahy, mijery horonantsary sy fahitalavitra, ary manomana ny fiainako manaraka.
Duet: Ampiasao ny iPad ho mpanara-maso fanampiny